Kpachara Anya - Google Search console na-eleghara ogologo oge gị anya | Martech Zone
Anyị kpughere ihe iseokwu ọzọ ụnyaahụ mgbe anyị na-enyocha ọrụ njikwa ngwa ọrụ nke ndị ahịa anyị. Ebufere m ma nyochaa echiche ma pịa data sitere na Ngwaọrụ njikwa Google Search ma chọpụta na enweghị ọnụ ọgụgụ dị ala, naanị efu na nnukwu ọnụọgụ.
N'ezie, ọ bụrụ na ị kwenyere Google Webmasters data, naanị nnukwu okwu na-anya ụgbọ okporo ụzọ bụ aha aha na usoro asọmpi siri ike nke onye ahịa họọrọ. Enwere nsogbu, n'agbanyeghị. Google Analytics data isiokwu na-egosi na-abụghị .. na imirikiti nke search engine okporo ụzọ na-abịa site longtail Keywords.
Have ga-agụ ezigbo mbipụta n'ime Google Search Console Chọọ ajụjụ isiokwu kpughere ihe na-eme:
Akara: Ọnụ ọgụgụ nke ibe peeji nke sitere na saịtị gị pụtara na nsonaazụ ọchụchọ, yana mmụba / ibelata mmụba na ngosipụta kwa ụbọchị ma e jiri ya tụnyere oge gara aga. Ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị kwa oge na-ebute 30, mana ị nwere ike ịgbanwe ya n'oge ọ bụla. (Nọmba ndị a nwere ike mechie, o nwere ike ọgaghị abụ eziokwu.)
Pịa: Ugboro ole onye ọrụ pịrị ndepụta saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ maka otu ajụjụ, yana mmụba / ibelata na ntinye kwa ụbọchị ma e jiri ya tụnyere oge gara aga. (Nọmba ndị a nwere ike mechie, o nwere ike ọgaghị abụ eziokwu.)
Nke ahụ ziri ezi… Webmasters na-emechi ọnụ ọgụgụ dị ala na ngosi NA pịa, naanị na-enye ọnụọgụ maka naanị nnukwu mpịakọta. Nke a na - eme ka njọ karịa eziokwu ahụ bụ na mkpụrụ okwu Keywords ogologo nwere ike ịchụpụ echiche dị mkpa na clicks! N'ezie, na nyocha anyị mere ihe karịrị otu afọ gara aga na blọọgụ a, imirikiti nke okporo ụzọ anyị niile na-abịa site na ogologo oge.
Yabụ, dị ka imirikiti ihe ndị na-eme nchọpụta, kpachara anya maka ịdabere naanị n'otu isi mmalite. Ọ bụ ihe nwute na Google enweghị ike ịnye data n'ezie na Webmasters, ekwenyere m na ọ ga - enyere ndị mmadụ aka ịkwụsị ilekwasị anya na isiokwu kachasị asọmpi ma wuo usoro ịzụ ahịa ọdịnaya dị mma.
Tags: google webmaster ngwaọrụndị webmasters googlegwtogologo-ọdụkeytail isiokwu
Nsonaazụ Ule-Udo na Nsonaazụ Hubspot
Jenụwarị 16, 2013 na 2:15 PM
Akwa post, Doug! Omume nke akụkọ ahụ, adaberela na otu eziokwu nke iji chịkọta data gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na isi iyi ahụ bụ Google 🙂
Jenụwarị 16, 2013 na 3:56 PM
Kpomkwem, @ twitter-16113225: disqus!